Famonoana zaza teraka amin'ny zaza vao teraka, trauma amin'ny fahaterahana eo amin'ny reniny - ny vokany
Famangiana nahaterahana - inona no mety hitranga amin'ny zaza sy ny renim-pianakaviana, ary ny fomba hisorohana ny fahavoazana?
Ny teny hoe "trauma teraka" amin'ny fiterahana dia matetika ampiasaina hanondroana ny fahasimbana amin'ny taova sy ny rafi-tranon'ny zaza vao teraka sy ny reny. Maro ny karazana fandidiana toy izany, ary ny tsirairay amin'izy ireo dia mampidi-doza.
Karazana trauma teraka
Ny ratra rehetra, rehefa voavonjy dia azo zaraina amin'ny:
trauma ny zaza vao teraka;
trauma amin'ny vehivavy amin'ny fiterahana.
Matetika matetika no simba ny fahavoazana rehefa mandalo amin'ny lakandrano. Amin'ireo ratra iraisana amin'ny zaza:
Ny fahavoazana amin'ny tavy marefo - ny fako, ny ratra, ny fahavoazana amin'ny tavy subcutaneous, ny hozatra, ny lakana fahaterahana, ny cephalothorem.
Ny ratra nahazo ny rafi-pandam-barotra: ny ratra sy ny fery amin'ny clavicle, ny tendrony, ny soroka, ny subluxation ny tady, ny fahasimbana ny taolam-paty.
Ny ratra amin'ny taova anatiny: raokandro ao amin'ny aty, adrenalinina, vaksiny.
Fiatrehana ny rafi-pitabatabana afovoan-tany: fampijaliana ny fahaterahana amin'ny fahaterahana, ratra lamosina.
Ny ratra amin'ny rafi-pandrenesana mahazaka: ny fahasimban'ny plexus brachial - parasy ny paresis / paralysis an'i Duchene-Erba na ny parasy ny Dejerine-Clumpke, ny paralysis tanteraka, ny paresezan'ny diaspora, ny fahasimbana eo amin'ny tarehy.
Anisan'ireo fahavoazana nateraky ny vehivavy iray nandritra ny fizotran'ny fahaterahana, ilaina ny manavaka:
mamelatra sy mamitaka ny vava;
fiterahana ny perineum;
fanitsakitsahana ny tsy fitovian'ny tranon-jaza, ny matavy.
Lozam-piankohonana amin'ny zaza vao teraka
Ny trangam-piaramanidina dia matetika vokatry ny fanitsakitsahana ny dingam-panafody, ny tetikadin'ny fiterahana. Noho izany, ny fahasimbana eo amin'ny hoditra, ny fofona manitra dia matetika miseho amin'ny trauma. Anisan'izany ireto:
Ny fahasimbana toy izany dia hita amin'ny fanaraha-maso ny maso ny zaza vao teraka. Tena mampidi-doza ny taova sy ny rafitra anatiny. Ny endrik'izy ireo dia ny tsy fisian'ny soritr'aretina mandritra ny andro maromaro sy herinandro maromaro. Mba hamantarana azy ireo, dia ilaina ny fomba fikarohana fanampiny. Ny vokatra dia miankina amin'ny fotoan'ny fitsaboana sy ny fikarohana ny trauma.
Famonoana zaza am-bohoka
Ny trauma amin'ny fiterahana amin'ny renim-pianakaviana dia miseho noho ny fitondran-tena tsy mendrika, ary koa ny haben'ny foetaly lehibe. Ny fipoahana Vulvar dia miteraka matetika ao amin'ny faritra misy ny labia minora, ny clitoris ary misolo-tena kely na ranomaso kely. Ny ratra eo amin'ny vava ao amin'ny ampahatelony ambany dia matetika mifamatotra amin'ny fiparitahan'ny perineum, ary raha ratra ny ampahany ambony, dia ratra ny volon'ny vovoka sy matanjaka. Ny ampahatelon'ny ampongabendanitra, noho ny fahaiza-manaony hikororohana, dia zara raha maratra. Ny fiparitahan'ny fahavoazana dia miseho amin'ny ankapobeny amin'ny dingana faharoa amin'ny asa.
Famonoana nahaterahana - antony
Ny fanadihadiana ny antony mety mahatonga ny aretina dia nahafahana namantatra ireo fotodrafitr'asa fototra 3 izay nahatonga fanitsakitsahana:
mifandray amin'ny toetry ny reny;
ny toetry ny foetus;
mifandray amin'ny rafitry ny fizotry ny fahaterahana, ilay antsoina hoe "traumatique".
Noho izany, eo anelanelan'ny filazana "reny matavy" dia matetika ny fiantefan'ny mpikaroka:
na aloha, na mifanohitra, ny taona fahataran'ny fananahana;
aretina ho an'ny bevohoka: aretim-borona, aretim-pivalanana, aretim-pivalanana;
vohoka vao haingana;
Ny vondron'olona maro mahatonga ny traumatan'ny zaza dia ireo mifandray mivantana amin'ny zaza. Noho izany dia matetika ny fandikana dia:
rano kely ;
ny fametrahana tsy filaminana ny loha ao anaty valizy;
lehibe lehibe amin'ny foetus;
Anisan'ireo tsy fahampian'ny asa, noho izany, ankoatra ny zavatra hafa, ny traumatiora momba ny voina miafina, ilaina ny manavaka:
haingana na mifanohitra, asa maharitra;
fanatanterahana ny fanentanana amin'ny rhythm amin'ny tsy fisian'ny asa;
ny asa atao tsy misy fandrindrana;
fampiasana tsy azo ampiasaina amin'ny fitaovam-pihetsiketsehana (mametaka ny tongotra, ny fampiasana fitaovam-pihetsiketsehana, fampiasana fitaovana iray).
Fifindrana amin'ny fiterahana
Ity karazana trauma ity amin'ny fiterahana amin'ny zaza dia vokatry ny boky fiankinan-doha tsy ara-dalàna. Matetika dia misy fahasimbana ny clavicle, taolana amin'ny tanana na ny tongotra (arakaraka ny karazana fampisehoana). Ny fiterahana eo amin'ny tendrontany dia voamariky ny dokotera amin'ny 2-3 tolakandro taorian'ny fiterahana. Amin'izao fotoana izao dia miteraka fanaintainana, antsoina eo amin'ny toerana misy ilay lesona. Noho ny fifindran'ny taolana dia tsy afaka manao fihetsiketsehana mivezivezy amin'ny fifehezana ny zaza tsy ampy taona, fa rehefa manandrana mamita-tena, manomboka mitomany izy.
Ny famitahana ny soroka na ny hip dia miaraka amin'ny tsy fahampian'ny fihetsiketsehana ny tongotra, misy fihenam-bava, ny famaritana, ny ratra manimba. Raha misy trangan-javatra toy izany dia misy ampahany amin'ny gypsum dia ampiasaina amin'ny fanavaozana ny tongotra naratra. Raha sendra voan'ny kirarobona ilay zaza, dia napetraka eo amin'ny fatoran'ny Dezo izy, ankoatra ny reny, dia manolo-tena ny hanatanteraka ny fivadibadin'io zaza vao teraka io.
Famonoana ny ratra
Ny ratra vokatry ny fipoahan'ny zaza amam-behivavy dia mitranga tsy misy hatak'andro. Ao anatin'io aretina io dia ahitàna karazana fandikana isan-karazany:
fandosirana ao amin'ny tadin'ny hazon-damosina;
Ny famongorana ny tadin'ny hazon-damosina.
Ny ratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana dia mety tsy ho hita maso ara-pahitana, fa miaraka amin'ny sarin'ny kliobana mazava. Misy marika eo amin'ny tsindry hazokely:
lethargy and hypertension;
tsy fisian'ny reflexes;
tsy mitomany ela loatra;
Ny fampandrosoana an'io aretina io dia miaraka amin'ny loza mety hitranga amin'ny fahafatesan'ny zaza vao teraka amin'ny tsy fahombiazan'ny reny. Ny trangan-javatra toy izany, asphyxia izay tsy azo ihodivirana, dia mety hitarika ho amin'ny fahafatesan'ny zaza. Miaraka amin'ny fandrosoana goavana ny fisehoan-javatra dia miteraka tsikelikely ny tsindry hazokely. Noho izany, amin'ny fanoloana ny fihanaky ny homamiadana dia lasa spasticity, misy ny fanehoan-kevitra vasomotor, ny hatsembohana, ny trofika amin'ny tebiteby sy ny muscular tissues manatsara. Ny ratra eo amin'ny fahazavana dia mifanaraka amin'ny fisehoan'ny soritr'aretina momba ny neurologique: fiovan'ny toetr'andro, reflexes ary ny fihetsiketsehana.
Famonoana zaza teraka ho an'ny zaza vao teraka
Ny trauma teraka vokatry ny firaisana dia vokatry ny famongorana ny lohan'ny lakandrano. Ny fanitsakitsahana dia mitranga rehefa tsy mifanaraka amin'ny tohodrano kely ny habetsahan'ny foetus na raha toa ka mihasimba ny asa (asa maharitra). Ny ratra lalim-paka matetika dia miteraka alikaola, izay miankina amin'ny toerana misy ny toerana misy azy, dia mety:
Ny Epidural - Cephalohechemata anatiny dia eo anelanelan'ny doro mater sy ny taolan'ny karandoha;
Ny tsiranoka amoron-tsiraka dia mifototra eo anelanelan'ny medulla solid sy arachnoid;
Subarachnoid - mipetraka ao amin'ny faritra subarachnoid;
Intraventricular - manomboka amin'ny lavaka fantsom-batana ambany;
parenchymatous - raikitra ao an-tsain'ny atidoha, izay manana ny toetran'ny hematoma;
Mifangaro - hafahafa maro ao amin'ny atidoha ao amin'ny atidoha, ventricles, atidoha.
Ny ratra nahazo ny rafi-pitabatabana
Mandritra ny fiterahana, dia mety hitera-doza ny rafi-pitabatabana sy ny periferika. Matetika, ny fizotry ny aretina dia ny fototarazo, plexus, ny peripheral sy ny taolam-paty. Ao anatin'ireo fihetsika mahazatra eo amin'ny rafi-pandrefesana mahazatra, dia matetika no hita:
paresis of the plexus brachial;
Ny paresis Duchenne-Erba - mifandraika amin'ny fahavoazana amin'ny plexus sy rootlets;
Ny paredrik-piaramanidina ambany kokoa ao amin'ny Dejerine-Klumpke - ny plexus na ny fakany dia voakasika, izay miteraka fihenana ny asan'ny sivily.
Ny fahavoazana amin'ny ratra nahazo ny rafi-pitabatabana ao an-toerana dia voafaritra mialoha ny fisian'ny toetra mampiavaka azy:
mitombo ny tazomoka;
famerana ny fihetsika ny tanana sy ny tongotra;
ny fijery ny dyspnea;
Ny aretina nateraky ny fiterahana - soritr'aretina
Ny famantarana ny fahaterahana amin'ny fahaterahana dia maro loatra fa ny dokotera dia mampiray azy ireo ho vondrona lehibe maromaro - miankina amin'ny taova izay nanimba ny taova. Ny traikefa nahaterahana ny loha, ohatra, dia miaraka amin'ireto toe-javatra manaraka ireto:
fahamendrehana (feo mihoam-peo) amin'ny hozatry ny tendany;
nystagmus (fihetsiketseham-pihetseham-pandrenesana mihetsiketsika ny eyeballs);
Tremor (fangovitana) amin'ny hozatra isan-karazany, fampiononana.
Ny marika lehibe amin'ny ratra ara-batana marefo dia:
Momba ny fanasitranana ny rafi-taolana dia miteny hoe:
fameperana ny hetsika mavitrika;
fanehoan-kevitra mampalahelo (mitomany) miaraka amin'ny fihetsiketsehana mipetaka eo amin'ny sisin'ny lozisiana;
Famaritana sy famenoana taolana tapaka.
Famonoana nahaterahana - Diagnostika
Ny taolam-piterahana ao amin'ny faritra voakolokolo dia tsy miteraka fahasarotana amin'ny aretina - mihodina amin'ny làlam-pandrenesana ny lohan'ilay zaza, misy ny fihenan'ny tonelina amin'ny lafiny mifanohitra. Na izany aza, ny fahasimban'ny taova anatiny dia mitaky ny fitondran'ny fikarohana fikarohana. Anisan'ireo fomba ampiasaina mba hamaritana:
fanadinana sy fitsaboana ny rantsana, loha;
Famaranana ny faritra voaaro;
Fitsaboana ny ratra vokatry ny fahaterahana
Rehefa hita ny tsiambaratelo nahaterahana, dia ny fitsaboana amin'ny ankapobeny dia ny fanaraha-maso feno sy ny fisorohana ny fahasarotana. Nahazo toro-marika manokana avy amin'ny dokotera ny Momany izay tokony hajaina tanteraka. Amin'ny ankapobeny dia mihena ny fitsaboana ny trauma:
fisorohana ny aretina azo avy amin'ny sela;
fanatanterahana ny fampihorohoroana, ny gymnastique ara-pitsaboana ho fampitomboana ny feon'ny musculature;
fametrahana rantsana simba;
Fanitsiana ny chirurgie (raha sendra fandehanana anaty, torticollis, ohatra);
Fitsaboana ara-pahasalamana ho an'ny fahasimban'ny rafi-pitabatabana.
Ny vokatry ny trauma
Mba hahazoana antoka fa tsy manana fivalanana ara-batana sy ara-tsaina ny ankizy aorian'ny ratra vao teraka dia tsy maintsy manatanteraka ny fotoana rehetra azony ny reny. Na izany aza, dia tsy dia zava-mahagaga foana ny trauma. Maro amin'ireo zaza vao teraka izay nandalo fitsaboana ho an'ireo androngo adrenal aorian'izany dia nahatonga ny tsy fahampian-tsakafo tsy fahita firy. Ny fahasimbana eo amin'ny rafi-pitabatabem-paoma sy ny periphera no tena mampidi-doza indrindra, ny fiheverana sy ny vokadratsiny dia miankina amin'ny fahasarotan'ny aretin'ny neurolojia.
Ny fandidiana vaginaly aorian'ny fiterahana
Firaisana taorian'ny episiotomy
Entina amin'ny fofona aorian'ny fiterahana
Aorian'ireo firy marobe no manomboka aorian'ny fanesorana ny cork?
Ahoana no tokony hitondran'ny vehivavy mandritra ny fiterahana?
Fametavetana ny fahaterahana - ahoana no ahafahan'ny zaza miteraka amin'ny fomba voajanahary sy artificielle?
Ny fizotry ny fiterahana
18 fomba mahomby hanoratana amin'ny fanadinana
Mpampiasa valopolo tamin'ilay andian-tranonkala "House of Cards" niampanga an'i Kevin Spacey momba ny fanorisorenana ara-nofo
Ny vadin'i Charlie Sheen, taloha, dia tafaverina indray
Holder amin'ny solomaso
Canyon an'ny renirano Piva
Hypoxia ny foetus - vokany
Ny vary orza eo amin'ny maso - fitsaboana any an-trano
Kitapo "Napoleon" - karazana tsotsotra
Ahoana no hikirakira trano fisakafoanana eo amin'ny rindrina misy rindrina?
Ahoana ny fomba hifandroana voatabia?
Mipetraha amin'ny lela